HANJABAAD: Marco Asensio Oo Ku Hanjabay Inuu Ka Tegi Doono Real Madrid Haddii Neymar Yimaado – GOOL24.NET
HANJABAAD: Marco Asensio Oo Ku Hanjabay Inuu Ka Tegi Doono Real Madrid Haddii Neymar Yimaado
June 11, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Xiddiga da’da yar ee xulka qaranka Spain ayaa ku hanjabay inuu ka tegi doono Real Madrid, laba toddobaad kaddib markii uu tababarihii kooxda guulaha gaadhsiiyey ee Zinedine Zidane ka tegay Los Blancos.
Marco Asensio ayaa u sheegay masuuliyiinta Real Madrid inuu ka tegi doono haddii kooxda la keeno laacibka reer Brazil ee Neymar oo aad loola xidhiidhinayo inuu xagaaga iman doono.
Sida uu qoray wargeyska Diario Gol ee kasoo baxa waddanka Spain, Real Madrid ayaa la wariyey inay ka shaqaynayso sidii ay Neymar ugu soo celin lahayd Spain, hase yeeshee Asensio ayaa ka fikiri doono mustaqbalkiisa haddii xiddiga reer Brazil uu yimaaddo Bernabeu.
Aseensio oo 28 ciyaarood u saftay Real Madrid dhamaan kulamadii xili ciyaareedkii tegay, ayaa waxa uu ka baqayaa in haddii uu Neymar yimaaddo ay yaraadaan fursadaha uu ka helayo kooxda koowaad, isla markaana uu waayo boos joogto ah.
Warku waxa uu sheegay in Asensio oo ay da’diisu tahay 22 jir uu u sheegay ciyaaryahannada xulka qaranka Spain iyo kuwa Real Madrid labada inuu ka tegi doono haddii isda la tibaaxyao uu Neymar yimaaddo kooxda, waxaana markiiba dhegta taagtay kooxaha Liverpool, Juventus iyo PSG oo si aad ah ula dhacsan mucjisadan yar.
Liverpool oo dhowaan ku fashilantay heshiiska Nebil Fekir ayaa noqon doonta naadiga koowaad ee dalab ka gudbiya haddii Asensio uu kaga dhabeeyo go’aankiisa.